Somaliland oo soo bandhigtay Ciidamo ka goostay Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Somaliland oo soo bandhigtay Ciidamo ka goostay Puntland
Ciidamadaan oo tiradoodu gaareyso 50 Askri ayaa lagu soo bandhigay degmada Boocame oo ka tirsan Gobolka Sool.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo ka howl-geli jiray gobolka Sanaag ayaa isku dhiibay Maamulka fadhigiisa yahay Hargeysa ee Somaliland.
Ciidamadaan oo tiradoodu gaareyso 50 Askri ayaa lagu shalay soo bandhigay degmada Boocame oo ka tirsan gobolka Sool, waxaana halkaasi soo dhaweyn ugu sameeyay saraakiil ka tirsan Somaliland oo sheegay in hadda wixii ka dambeeyo ciidamadaasi ay ku xuquuq yihiin kuwa Somaliland.
Sababta rasmiga ah ee ka dambeysay soo goosashada ciidamadaan lama oga, balse waxaana xusid mudan in ciidamadaan ay wateen gaadiid Dagaal iyo Hub ay kala baxsadeen Maamulka Puntland.
Dhinaca kale saraakiisha ka goostay Ciidamada Puntland ayaa dhankooda sheegay iney ciidamada Somaliland ku biireen, isla markaana ay kala shaqeyn doonaan sugida Amaanka, iyo difaaca danaha Maamulka Hargeysa.
Somaliland iyo Puntland oo isku heysta gobolada Sanaag iyo Sool qeybo ka mid ahaa ayaa ciidamadooda aagagaas ku sugan waxay ku caan baxeeen iney u kala goostaan labada dhinac, waxaana maalmahaan soo badanaya xiisadda ka jirta Gobolka.